मृत पुस्तक | एसएमएस स्लट अनलाइन | पाउन्डस्लोट्स अनलाइन क्यासिनो
अनलाइन स्लट खेलहरूको कोटी सम्भवतः अनलाइन क्यासिनो विश्वमा सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको हो। त्यहाँ सयौं उत्कृष्ट खेलहरू छन्, र अधिक प्राय: प्रायः थप भइरहेको छ। विकासकर्ताहरू नयाँ र आकर्षक विचारहरूको साथ आउँदैछन् उनीहरूको स्लट खेलहरू बेस गर्न र खेलाडीहरू रमाईलो र मनोरन्जन र मनोरन्जनको लागि नयाँ खेल अन्वेषण गर्दै। त्यहाँ हाल धेरै लोकप्रिय खेलहरू छन् जुन मानिसहरूले उपभोग गरिरहेका छन्, जुन मध्ये एक हो मृत स्लटको पुस्तक। यो हाल अनलाइनमा उपलब्ध छ https://www.poundslots.com.
मृत स्लटहरूको पुस्तकको एक द्रुत झलक
को मृत स्लटको पुस्तक एक लोकप्रिय अनलाइन स्लट खेल हो, जुन प्राचीन इजिप्टियन संस्कृतिमा आधारित छ र केही उत्कृष्ट डिजाइन र आकर्षक ग्राफिक्सको साथ आउँदछ। यो स्लट खेल सबै उपकरणहरूमा पहुँचयोग्य छ, यो कम्प्युटर र ल्यापटप हो वा अधिक लोकप्रिय मोबाइल उपकरणहरू अनलाइन क्यासिनोहरू र क्यासिनो खेलहरूमा पहुँच गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।
दृश्य प्रभावहरू, विशेष गरी प्रभावशाली पृष्ठभूमि र प्रतीकहरू, ग्राफिक्स विशेष रूपमा विशेष प्रतीकहरू र सुविधाहरू र पृष्ठभूमि संगीत इन्द्रियहरूको लागि अपील गर्दैछन्। खेलको रूपरेखा यद्यपि धेरै सरल छ र r पows्क्ति र १० सक्रिय paylines को साथ एक मानक els रल्स डिजाइन प्रदान गर्दछ। विकासकर्ताहरूले विशेष सुविधाहरु लाई पनि साधारण राख्ने निर्णय गरेका छन् मृत स्लटको पुस्तक केवल एक विशेष प्रतीकको साथ आउँदछ जुन दुबै वाइल्ड्स र स्क्याटरस प्रतीकको रूपमा काम गर्दछ र विशेष स्प्रिन्स मोड विशेष सुविधाको रूपमा।
के पुस्तक ओड डेड स्लटले जुवा फिचर प्रदान गर्दछ?
को एक अद्वितीय सुविधा मृत स्लटको पुस्तक जुन सामान्यतया अन्य समान स्लट खेलहरूसँग उपलब्ध छैन जुन जुवा सुविधा हो। यो सुविधा हरेक पटक सक्रिय हुन्छ जब खेलाडीले जित्ने मैदानमा खेलाडीहरू, जहाँ खेलाडीहरूलाई उनीहरूको खेल जित्ने मौका १: १ परिस्थितिमा प्रदान गरिन्छ। यदि जुवा सुविधा चयन गरिएको छ भने प्लेयर प्ले कार्ड फेसडाउनको साथ प्रदान गरिएको छ, र तिनीहरूले कार्डको रंग अनुमान गर्नुपर्दछ। जीतलाई शर्तको हिस्सा मानिन्छ र यदि खेलाडीहरू जित्छन् भने उनीहरूलाई डबल जित दिइन्छ र यदि उनीहरू हराउँछन् भने उनीहरूले पूरै जित्छन्। यदि खेलाडीहरूले कार्डको रंगलाई सहीसँग भविष्यवाणी गर्न व्यवस्थित गर्छन् भने उनीहरूलाई अर्को जितको मौकाको साथ जितिएको हुन्छ, र खेलाडीहरूले मूल शर्तमा अधिकतम २00०० पटक बनाउँदा यो जान सक्दछ।
यसैले, मृत स्लटको पुस्तक मानक र अद्वितीय सुविधाहरूको एक उत्कृष्ट मिश्रण हो जुन खेललाई मनोरञ्जनात्मक र रोमाञ्चक बनाउँदछ!